AKHRISO: Musharax Siciid Deni oo la kulmay Safiirka UK u qaabilsan Soomaaliya, Maxayse ka wada hadleen? – Puntlandtimes
AKHRISO: Musharax Siciid Deni oo la kulmay Safiirka UK u qaabilsan Soomaaliya, Maxayse ka wada hadleen?
April 18, 2018 W LAASCAANO
NAIROBI(P-TIMES)- Musharax Siciid Cabdullaahi Deni oo kamid ah musharaxiinta u taagan Madaxweyne-nimada Puntland ayaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya, kula kulmay maanta Safiirka dawladda Ingiriiska u jooga Soomaaliya, waxaana kulanka labada masuul ay uga wada hadleen arrimaha siyaasadeed ee gudaha Soomaaliya.
Musharaxa Siciid Cabdullaahi iyo Safiirka ayaa ka wada hadlay xiisadaha siyaasadeed ee u dhaxeeya Soomaaliya & Imaaraatka Carabta oo todobaadkii ugu dambeeyey gaaray halkii ugu sareeyey, waxayna is dhaafsadeen aragtiyo kala duwan oo ku jiheysan arrimahan.
Sidaas oo kale xaaladda Siyaasadeed ee Soomaaliya, gaar ahaana dhanka Ammaanka ayay ka wada hadleen oo ay ka mid tahay xaaladda ka taagan deegaanka Tukaraq oo ay isku horfadhiyaan ciidamada labada maamul ee Puntland & Somaliland.
Mr, Deni ayaa kala hadlay safiirka arrimaha ku saabsan doorashooyinka Madaxtinimo ee la qorsheynayo in ay Puntland ka dhacaan sannadka 2019-ka, sidda ay u tahay in wadajir looga qeyb noqdo qabsoomida doorasho xor iyo xalaal ah.
Kulanka wuxuu ku soo beegmay xili xaaladdaha siyaasadeed ee Soomaaliya ay is rog-rogayaan todobaadyadii ugu dambeeyey, waxaana muuqatay in ay Dawladda Faderaalku aad iskugu xumaadeen dawladda Imaaraatka Carabta oo muddo dheer caawinaysay Soomaaliya.